ကောက်ထားတဲ့ ဆံသားတွေ ဖွာပြီးပျက်စီးနေလို့ စိတ်ညစ်နေပါသလား? | CosmeticMyanmar
Home » Article » ကောက်ထားတဲ့ ဆံသားတွေ ဖွာပြီးပျက်စီးနေလို့ စိတ်ညစ်နေပါသလား?
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်။ Beauties တို့ထဲမှာ ဆံသားကောက်လို့ ဒါမှမဟုတ် ကောက်ဆေးအသုံးပြုပြီး အပူကြောင့် ပျက်စီး ဖွာခြင်းများကို ကြုံတွေ့နေရတဲ့ Beauties တို့ရှိပါသလား? ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ စိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူးနော်။ ကောက်သားပိုမိုပေါ်လွင်စေပြီး ပြန်လည်အားဖြည့်ပေးမယ့် Garnier ရဲ့ Curl Treat Series လေးရှိနေပါပြီ။
ဒီ Series မှာ Digital ကောက် ပါးပါးလေးတွေ ကောက်သားပိုမိုလှပနေစေမယ့် Smoothie, ကောက်သားတွေအားလုံးကို အစိုဓာတ်ဆက်လက်ထိန်းထားပေးနိုင်မယ့် Jelly, ရေဓာတ်ကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်မယ့် Butter ဆိုပြီး3မျိုးထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
98 % ထိတိုင်အောင် သဘာဝပစ္စည်းများကိုသာ အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အရေအသွေးကောင်းတဲ့ ပစ္စည်းများကိုသာ အသုံးပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ကောက်သားပိုမိုလှပစေပြီး ပေါ့ပါးမှုကို ခံစားရမှာပါ။ ဘယ်လိုကောက်သားပုံစံမျိုးမဆို ၂၄ နာရီကြာ ပုံကျလှပနေစေပါတယ်။
ဆံသားကို ကျန်းမာ ချောမွတ်စေပြီး ဆံသားနှစ်ခွဖြစ်ခြင်းကို ကုသပေးနိုင်မယ့် ထောပတ်သီး၊ ဆံသားကို ပြန်လည်သန်မာစေပြီး ရေဓာတ်ပြည့်ဝစေမယ့် အုန်းဆီ၊ ဆံသားခြောက်သွေ့ ပြတ်ထွက်ခြင်းကို သက်သာစေမယ့် African Shea Butter တို့ပါဝင်ပါတယ်။
အသုံးပြုတဲ့အခါ စေးထိုင်းနေတာမျိုးမဖြစ်တဲ့အပြင် အသုံးပြုထားမှန်းမသိသာပဲ စိုပြေတဲ့ကောက်သားကို ရရှိစေမှာပါ။ အသုံးပြုတဲ့အခါ အကြွေစေ့ ပမာဏလောက်ကို ဆံသားမစိုမခြောက်အချိန်လေးမှာ လက်ဖြင့်ဆုပ်ပြီး လိမ်းပေးရပါမယ်။ သဘာဝ လေနဲ့ အခြောက်ခံပြီးနောက်မှာတော့ ၂၄ နာရီ တိုင်တိုင် ကောက်သားကို ထိန်းထားပေးနိုင်တာကို တွေ့ရမှာပါနော်။
ဈေးနှုန်းအားဖြင့် $ 8 ကျသင့်ပြီး အရေအသွေးကောင်းမွန်တာကြောင့် မှာယူလိုပါက Scarlet Cosmetic တို့မှာ မှာယူရရှိနိုင်ပါတယ်။